Maitiro ekuchinjisa kune yekudyara portfolio? Akawanda mazano ekuti uwedzere | Ehupfumi Zvemari
Maitiro ekuchinjisa kune yekudyara portfolio? Akawanda mazano ekuti uwedzere
Ehezve, yakangwara nguva yenguva yakatopfuura kuti uongorore zvakazara shanduko yekudyara kwako. Kunyangwe nekuchinja kwemari zvinhu. Kwete chete maererano neiyo mari yakasiyana-siyana, asi zvakare kune yakamisirwa mari kana kunyange mamwe emhando dzekudyara zvakajeka. Iyo ichave inopfuura inguva yakakodzera ye kusiyanisa kana kuchengetedza nzvimbo dzako. Nechinangwa chekuti mumwedzi iri kuuya kudzoka pane yako mari kunosimbiswa nekusimba kukuru. Iwe hauzove neimwe sarudzo asi kuve unoshingairira mukugadzirisa capital yako.
Kana zvese zvikafamba sekuronga, makorokoto. Siya zvese sezvazviri, uye pamwe ita shanduko diki diki ku chengetedza hupfumi hwako mumisika yemari. Asi zvirokwazvo pasina kufamba kamwe kamwe sezvo zvinopfuura kukubatsira kuzadzisa ichi chinangwa, zvinogona kukukuvadza iwe uye kupfuura zvaunofunga pakutanga. Iyi ingave iri nzira yekuchengetedza kuenderera mumutsara mumwe chete wakanaka mawakanyudzwa munguva dzino chaidzo.
Imwe nyaya yakatosiyana ndeyekuti mari idzi hadzisi kusimukira sezvawaida. Hakuzovi nemimwe mhinduro kunze kwekusiyanisa nzira uye kuifambisa yakanangana neyakanakisa miganhu inopihwa nemisika yemari. Iwe unozokwanisa kugadzirisa zviito izvi kuburikidza nemaitiro akasiyana anozove nechinangwa chikuru gadzirisa zvikanganiso zvakaitwa kubvira kutanga kwegore. Iine dzimwe nzira dzinoverengeka dziri patafura, kana kuti pane misika yezvemari. Sezvo iwe uchizokwanisa kutarisa pazasi.
1 Chinja kudyara: sei?
2 Dzvanya njodzi
3 Ongorora zvikanganiso zvakaitwa
4 Wedzera zvinhu zvazvino
5 Tsvaga kuchinjika mukudyara
6 Mikana yebhizimisi
Chinja kudyara: sei?
Nekusvika kwechirimo zvakare, ichave iri mukana wakanyanya kunaka kukudziridza gadziridzo dzinodiwa mukudyara kwako. Ichave inguva yekuzvibvunza iwe mimwe mibvunzo inobatsira kwazvo pane zvaunofarira. Semuenzaniso, ndekupi kwatinofanira kutarisa kana marongero api aunofanirwa kutarisisa hupfumi hwako kubva zvino zvichienda mberi. Kuburikidza nemamwe mapepeti anobatsira iwe unozokwanisa kuenda kumberi mune zvaunodyara gore rino. Kana kunyangwe ku nguva refu yekugara kana ichi chiri chishuwo chako.
Nekuti zvirizvo, hapana zvirinani kupfuura kuchinja izvo zvakakunakira iwe. Ive iko muchibvumirano chezvigadzirwa zvemari sekudyara kwakananga mumisika yemasheya. Kubva pane ino maonero, chero kuvandudzwa kunogona kuita kuti iwe uwedzere yako yekutarisa account account pamwe nekureruka. Imwe yeaya mazano anobva ku nzira inoshanda zvakanyanya Izvo kusvika ikozvino. Nekubata-kumusoro kunzvimbo idzo chokwadi chisiri kusangana nekutarisira kwako kutarisira.
Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutonga njodzi yekuita kwako kwemari. Ehezve zvakanyanya kupfuura pakutanga. Iwe unofanirwa kupa mhinduro dzinochinja-chinja kuhukama hwako nenyika yakaoma yemari. Imwe yezviito zvako izvi zvinogona kuenderera kubva munzira yekudyara iyo inonyanya kuchengetedza. Ehezve, ichakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako pakupera kwegore, zvirinani.
Zano chairo rinoshanda kune aya mamiriro rinosanganisira zvakananga mukunyatsoongorora zvese zviwanikwa zvinoumba mari yekudyara pane mukana mudiki. Zvinogona kuitika, semuenzaniso, kuti varimi vane kurema kwazvo mune mamwe matunhu. Kuburikidza nekubvumirana kwezvimwe zvigadzirwa zvemari. Ichave iri nguva yakakodzera kwazvo yekuita maitiro matsva kune ino investa. Kubvisa kuvepo kwemasekete ane chinzvimbo chepamusoro mune yakasarudzwa dhizaini.
Imwe yemaitiro anopa rubatsiro rwakakura kune vese vashandisi ndeyekuchengetedza imwe nhanho kune zviwanikwa zvemari. Kupa kamuri, kwete chete kune zvigadzirwa zvakabatana neyakaenzana, asi zvakare kusanganisira imwe yakamisirwa mari kana kunyange mamwe mamodheru. Chero zvazvingaitika, kana chimiro chaunopa chiri panzvimbo yekuchengetedza kana kuzvidzivirira, iwe zvakare uchave nemukana weku kuderedza kutarisira njodzi. Ichi chiito chinogona kuitwa nekuyera zvikamu uye zvigadzirwa zvine huwandu hwenjodzi hwakaderera pane humwe. Ichagara ichipa kukudzwa kukuru kune yako mari kubva ikozvino.
Ongorora zvikanganiso zvakaitwa
Pane imwe nhanho yemabatiro aunofanirwa kuisimbisa muchikamu chino, haugone kupotsa ongorora mari isingashande. Uye izvo zvichave zviri kunyatso kuyera iko kudyara kuzere. Chichava chikonzero chakakwana chekuita shanduko inonzwisisika mune yako investfolio portfolio Kuti maitiro aya aendeswe nezvose zvivimbiso, nzira yakanakisa yaunofanirwa kuzviita ndeyekuitakura uine imwe nguva. Izvo zvinogona kuitwa trimester yega yega, semester kana kunyangwe gore rega. Zvese zvinoenderana nezvinodiwa chaicho zvaunazvo nguva dzese.
Rimwezve zano rinoshanda pazviitiko izvi ririmo muhunyanzvi hwekugadzirisa kune izvo zvido zvitsva izvo misika yemari yaunopa kwauri nguva dzese. Nekuti zvirokwazvo, kana iwe uri wekufunga kuti zvimwe zvigadzirwa kana hunhu vanozozviita zvirinani kana zvakanyanyaIzvo zvine musoro kugadzirisa yako portfolio zvinoenderana. Hazvishamise kuti iwe wakakwanisa kuvhiringidzika kana kungoita usina kufunga nezvezviitiko zvinoitika izvozvi. Kunyangwe yeizvi iwe uchazoda shanduko diki kana hombe muchikamu chikuru chemari.
Kana iwe haugone kukanganwa kuti iko kushanduka kwakanaka kweimwe nhumbi yemari kunogona kukutungamira kuvhura nzvimbo nyowani mukushanda kwawakanga wakanganwa. Kubudikidza neanoshanda kwazvo manejimendi manejimendi ayo anoziva kwazvo iyo nhau dzinoitika munyika yehupfumi. Zvese padanho renyika uye kunze kwemiganhu yedu. Ichave iri nzira inonakidza yekuwedzera kudzoka pane yako mari. Nemhedzisiro inogona kuve yakanyanya uye chii chiri nani, inobatsira kupfuura nakare.
Wedzera zvinhu zvazvino
Iyi ndiyo mimwe yemitsetse yakakosha yekuita yaunayo pamberi pako kubva panguva ino zvichienda mberi. Nekuti iri rakasarudzika zano rakavakirwa pane chimwe chinhu chiri nyore se zvigadzirwa zvinobatsira kwazvo nguva dzese. Izvi zvinoda kuti iwe uite ongororo yenguva dzose yeako makuru emari midziyo. Kuva kuvatsiva neizvo zviri kunyatso kuita mumisika yemari. Icho chichava kugadziridza kunodaidzwa kuve kwakanakira iwe pachako zvido zvako.
Ichave imwe yeakanakisa marongero aunofanirwa kuita ekuita kwako mashandiro uye nekuita purofiti yemari yekufarira mukutarisana kwenguva pfupi kana yepakati yekugara. Nenzira iyi, iwe unenge uri mune yakanakisa mamiriro ekuti uone chaiwo iwo munguva. mabhizimusi mikana. Kubva pane zvese zvinogona kuitika mamiriro emari. Kubva pane yakanyanya kuwedzera kune yakajeka yakajeka. Mune ese iwo uchave uine dzimwe nzira dzekuita mabasa ane pundutso mumisika yemari. Kusiyana nemamwe marongero ekudyara ayo akatsiga munzira dzawo.
Tsvaga kuchinjika mukudyara
Inova imwe inoshanda kwazvo modhi yekuzadzisa zvaunotarisira nekudzoka kuri nani. Saka kuti nenzira iyi, iwe unokwanisa kuchinjisa mari zvinoenderana neese emamiriro ezvinhu inogadzirwa kubva kumisika yemari. Iwe une nzira yakapusa yekushandisa iyi yakasarudzika zano kuburikidza neanoshanda manejimendi ako ekudyara. Iri basa rinogona kuwanikwa nekuchengetedza yako portfolio yekudyara. Kunyatso kuziva nezvazvo, kugadzirisa chero kukanganisa kwaungaite.
Zvakare nzira yepakutanga yekuzadzisa zvinangwa zvako inoenderana nekuhaya zvigadzirwa zvemari zvinosangana nezvinodiwa izvi. Imwe yeakanyanya kukosha anouya kubva ku inoshingairira manejimendi mari. Hazvishamisi kuti zviri kuwedzera zvakajairika kumakambani manejimendi kuita mamodheru ane maficha aya. Saka kuti nenzira iyi, iwe pachako haufanire kuita chero chinhu. Nekuti mukuita, ichave iri maneja iye ari mukutarisira kwekutsvaga akanakisa emabhizinesi mikana nguva dzese uye mune hupfumi hwenyika.
Ichakupa iwe mukana wekuenderera mberi nekuvandudza purofiti. Kuvandudza izvo zvikamu zveaya mamodheru ekudyara. Zvese zvine chekuita nekufamba mune zviyero uye mari yakatarwa, pamwe ne mamwe mamodheru. Uchave mukana wakanaka kuti uyu modhi unokupa iwe mukuchengetedza kwemaitiro ako. Kusvika pakuti iwe une akati wandei sarudzo yekusarudza iyi yakasarudzika zano. Semazhinji mamodheru ekuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire iwe unayo panguva ino.
Chero nzira, ichagara iri nguva yakanaka yekuti iwe uongorore uye kutokwanisa kune dzakasiyana nzvimbo dzako. Ichave ndiyo nzira yakanakisa kuitira kuti iwe usawane kushamisika kwakashata mukati megore rino uye kunyangwe mamwe maekisesaizi. Kuva munzvimbo dzakamira zvakanyanya ndicho chinhu chakaipisisa chaungaite. Kunyanya kunguva dzekugara zvachose yakanangana nepakati nepakati. Iwe unofanirwa kudzidza kubva pamakanganiso akaitwa mune yakapfuura kurovedza muviri. Iko, nekusave nekuvandudza izvi zvirevo, iwe unenge warasikirwa nemazhinji ma euro munzira. Nekuti muhukama hwako nenyika yemari uchafanirwa kumutsiridza nzvimbo dzako. Kwete chete mumamiriro akashata kwazvo. Iyi ndiyo imwe yesarudzo dzaunofanira kudzidza kubva kumisika yemari. Shanduko yenguva inogona kugadzirisa matambudziko aunazvo panguva ino. Iwe unoda here kutora zano iri ratiri kuronga muchinyorwa chino?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Maitiro ekuchinjisa kune yekudyara portfolio? Akawanda mazano ekuti uwedzere
Unogona here kuteerera kurudziro yemusika wemasheya emabhangi?